တစ်နှစ်တာအတွက် ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး အကောင်းဆုံးယောကျာင်္းဆု
တစ်နှစ်တာအတွက် ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး အကောင်းဆုံးယောကျာင်္းဆုပါတဲ့ ....
Husband of the Year !!!!
Starting off the competition of the Husband of the Year Awards
The Honorable menton for :
ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ကိုတော့ ..... သူနဲ့ ရပြီးယင်....
အိုင်ယာလန်က ကိုအကြင်နာချစ် ပါ....
.... followed closely by the United State of America
နောက်ထပ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုကိုပဲ ရသွားတာကတော့....
အချေကြီးသွားစေမယ့် ....အမေရိကား ငနဲပါ....
ပြီးတော့ .....နောက်ထပ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု အဖြစ်...
လေဒီတွေ ဆလံ သ ရမယ့် ...ကိုကို က
ပိုလန် က ဖြစ်ပါတယ်...
but ... Third Place must go to.....
တတိယ ဆုထူးကြီးကိုတော့ 
သူနဲ့ ရယင် ...
မချိသွားဖြဲလေး နေရမယ့်... ဂရိသားငနဲ ပါပဲ...
was awarded to .....Serbia
ခက်ခက်ခဲခဲ ...အကြိတ်အနှယ်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ရခဲ့ တဲ့ဒုတိယဆု ပိုင်ရှင်ကတော့ 
အကြင်နာကြီးမားတဲ့ ....ဆာဘီးယား သား ပါတဲ့ ဗျာ....
But the Winner of the Husband-n-Wife of the year
...... is ......
' Scotland '
နောက်ဆုံးပိတ် ...ဗိုလ်တစ်ကာ့ ဗိုလ် ...ပထမဆု ရယူဖို့ ကတော့ ...
စကော့ တ်တလန် သားများပါပဲ....
ချစ်သူ၊ဇနီးအတွက် ခွန်အားတွေဖြစ်အောင် လက်ကလေးပါတွဲထားသေးတယ်...
The Scottish are true Romantics....look , he's even holding her hand.
မိန်းမဆိုတာ ယောကျာင်္းနဲ့ မခွဲစကောင်းဘူးဆိုတာ အောက်ပါစာလုံးများက
Woman has Man in it....
Mrs. has Mr. in it.....
Female has Male in it.....
She has He in it....
Madam has Adam in it....
Ok , Ok , it all makes sense now....
I never look at it this way before :
ဒါပေမဲ့ လည်: အခုလိုတော့ တစ်ခါမှ သင် စဉ်းစားမိခဲ့ မှာမဟုတ်ဘူး
အမျိူးသမီးတွေခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာများ၊ ပြဿနာများရဲ့ 
မူလအစဟာ ယောကျာင်္းတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ
သင် သတိထားမိရဲ့ လား....
( အားလုံးဟာ ဒင်းတို့ ကြောင့် ....)
When we have Real trouble , it is a
နောက်ဆုံး ပြဿနာက လုံးဝကြီးမားပြီးဖြေရှင်းလို့ မရတော့ ယင်
နောက်ဆုံးပိတ် ဖြေရှင်းရတာကတော့ ....
( Hysterectomy )
အဓိပ္ပါယ်များကိုတော့ မိမိတို့ ဘာသာ ရှာကြည့် ကြပါကုန်....
မူရင်းကို forward mail မှ ရရှိပါတယ်...
Posted by Unknown | at 8:09 AM |0comments
Labels: funny: internet
Sticking out your tongue ruled illegal in Italy
လျှာမထုတ်နဲ့ ....ရှော့ ခ် ရှိတယ်...
အီတလီနိုင်ငံရဲ့ အမြင့် ဆုံးတရားရုံးက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို လျှာထုတ်ပြီး ပြောင်ပြ၊ စော်
ကားတာဟာ ဥပဒေချိူးဖောက်တာ၊ ဥပဒေနဲ့ ဆန့် ကျင်ပါတယ်လို့ အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့ ပါတယ်...
အဆိုပါဆုံးဖြတ် ဟာ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဟာ သူ့ ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ အငြင်းအခုန်ဖြစ်
ရာမှာ လျှာထုတ်ပြီး ပြောင်ပြနေခဲ့ တာကို မိုဘိုင်းလ် ဖုံးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ ပြီး တရားစွဲဆို အမှု
ဖြစ်ခဲ့ တာရဲ့ အကျိူးဆက်ဖြစ်ပါတယ်....
လျှာထုတ်ပြောင်ပြခဲ့ တဲ့လယ်သမား Carlo ကိုတော့ တရားရုံးက အိမ်နီးနားချင်းတွေကို
စော်ကားမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကာ အပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်....
တရားရုံးတော်ကတော့ သူ့ ကိုအပြစ်ရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ ပြီး သူ့ ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ တရား
မှုအတွက် ကုန်ကျစားရိတ် ၁၈၆၃ ဒေါ်လာ ပေးဆောင်စေဖို့ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်...
ဒါ့ အပြင် သူ့ အိမ်နီးချင်းတွေအတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးစားရိတ်တွေကိုလည်း ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်
ပါတယ်...အဲဒီအတွက်တော့ နောက်ထပ် ရုံးချိန်းတွေမှာ ထပ်မံကြားနာဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...
အီင်္တလီနိုင်ငံမှာတော့တရားရုံးများဟာ လူတွေကို တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်နစ်နာ
စေမှု နဲ့ အပြစ်ရှိကြောင်း စီရင်ဆုံးဖြတ်လေ့ ရှိပါတယ်...
အီတလီများရောက်ခဲ့ ယင်တော့ ...
လျှာထုတ်ပြီးမပြောင်ပြမိဖို့ သတိထားပေတော့ ဗျာ....
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီလိုဆိုထားလေရဲ့ ...
Italy's highest court of appeal affirmed the illegality of insulting someone by sticking your tongue out at them.
The case brought before the Cassation Court involvedafarmer whose tongue gesture was captured byacellphone camera held by the neighbour with whom he was arguing. The farmer, Carlo O., had been convicted byajustice of the peace of insulting the neighbour.
The Cassation Court let stand the conviction and ordered Carlo O. to pay his neighbour's court costs of $1,863.81. He will also have to pay damages, which will be set inadifferent trial.
Italian courts often find people guilty of offending someone's honour.
Posted by Unknown | at 9:53 AM | 1 comments
Labels: news: upi.com
ဟန်မူရာဘီ၏ ကိုဓ ဥပဒေလေလား....
ကိုယ့် မကောင်းဒါဏ် ... ကိုယ်ပြန်ခံ....
လက်ထပ်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နားနှင့် နှာခေါင်းကို ဖြတ်ပစ်ခဲ့ တဲ့ ပါကစ္စ
တန်နိုင်ငံသား ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို သူတို့ ရဲ့ နားနှင့် နှာခေါင်းများကို ဖြတ်ပစ်ပြီးအပြစ်ပေးဖို့ 
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံရဲ့တရားရုံးတစ်ခုက အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
Sher နှင့်Amanat Mohammad တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ အသက် နှစ်ဆယ်အရွယ်ရှိ
သူတို့ ရဲ့ နှမ တစ်ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ Fazeelat Bibi ရဲ့ မိဘတွေက သူမနဲ့Sher ကိုလက်ထပ်ပေး
စားဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ တာမို့သူမရဲ့ လည်ပင်းကို ကြိုးနဲ့ ချည်ပြီး နှာခေါင်းနဲ့ နားတွေကို ဓါးနဲ့ လှီးပြီး
အဆိုပါညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ လာဟိုးမြို့ ကတရားရုံး ကနေ လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်ပတ်က
တရားရုံး ဥပဒေပညာရှင်တွေက အခုလို သူတို့ ရဲ့ မျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ပစ်ပြီး
အပြစ်ပေးတာဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုင်ရာ အခြေခံ စည်းမျဉ်းဖြစ်တဲ့ရန်ကိုရန်ချင်းတုန့် နှင်း
ရမယ် ( မျက်လုံးတစ်လုံးအဖောက်ခံရယင်၊ အစားထိုးတစ်လုံးပြန်ဖောက်ပစ်ရမယ် ) လို့ ဆိုတဲ့ 
အဆိုအမိန့် နဲ့ အညီပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်...
Sher Mohammad နဲ့Amanat Ali တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ စက်တင်ဘာလတုံးက
သူတို့ ရဲ့ ဝမ်းကွဲ ညီမဖြစ်သူ Fazeelat Bibi ကို သေနတ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီးပြန်ပေးဆွဲခဲ့ တာဖြစ်
ပါတယ်....ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ သူမရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက Sher ကို သူမနဲ့ လက်ထပ်ပေးဖို့ 
ငြင်းဆန်ခဲ့ လို့ ဖြစ်ပါတယ်....( သူတို့ တွေက အမျိူးချစ်တွေနဲ့ တူပါရဲ့ ...ကိုယ့် ညီမ ကိုယ်ပြန်
သူတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ဟာ နှာခေါင်းနဲ့ နားတွေပြန်ပြီးအဖြတ်ခံရမယ့် အပြင် ထောင်ဒါဏ်
လာည်း အနှစ် ၇၀ ကျော် ကျခံကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
အခုလို သူတို့ ရဲ့ နား၊ နှာခေါင်းတွေကို ဖြတ်ပြစ်ဖို့ အပြစ်ပေးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာ
သာရေးဥပဒေ Qisas အရ ဖြစ်ပြီး အခုလို အပြစ်ပေးတာမျိူးအလွန်ရှားပါတယ်...
ဤဥပဒေဖြင့် အပြစ်ပေးခြင်းကို ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ဇီယာအူလ်ဟတ် ၏ စစ်အစိုးရလက်ထက်က၁၉၇၉
ခုနှစ်တွင်ပြဌာန်းခဲ့ ပေမယ့် ပါကစ္စတန်တရားရုံးများကတော့ထိုဥပဒေအရ အပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်တဲ့ 
ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပယ်ဖျက်ပေးလေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်...
Bibi ကို လွန်ခဲ့ တဲ့ စက်တင်ဘာလက သူမ အလုပ်လုပ်ရာ အုတ်စက်ရုံမှပြန်လာစဉ် မိုဟာမက်တို့ 
ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်နှင့်ကြံရာပါ အပေါင်းအပါများက ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ရဲတပ်ဖွဲ့ ကတော့ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ သူတို့ ရဲ့ အပေါင်းအဖော် သုံးယောက်ကို ဆက်လက်
အစိုးရ၏ ဥပဒေအရာရှိအကြီးအကဲ Chaudray Mohammed Jahangir က ထိုညီအစ်ကိုနှစ်ဦး
က ( ကျန်တဲ့ အမျိူးသမီးများကိုလည်း ) နမူနာအနေနဲ့ ဖြစ်စေရန် ကောင်မလေးကို မျက်နှာအင်္ဂါ
အစိတ်အကပိုင်းတွေ ဖြတ်ပြစ်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကိုယ့် လူတွေက ဖိတ်ချင်းဖိတ် ကိုယ့် အိတ်ထဲပဲ ဖိတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ ....
ဆေးပညာသုတေသနပြုချက်များအရတော့ထိုကဲ့ သို့ သွေးချင်းအလွန်နီးသည့် ဆွေမျိူး
နီးစပ်များအိမ်ထောင်ပြုလျှင် မွေးဖွားလာသော သားသမီးများတွင် မျိူးရိုးဗီဇ ဆိုင်ရာချွတ်
ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပွားရန် ပိုမိုအခွင့် အလမ်းများသည်ဟု ဆိုပါတယ်...
The two brothers, Sher Mohammad and Amanat Ali, abducted their 22-year-old cousin, Fazeelat Bibi, at gunpoint in September after her father refused to let her marry Mohammad (file picture)
Posted by Unknown | at 5:04 AM | 1 comments
Christian girl, 16, gets 50 lashes for wearing 'indecent' knee-length skirt in Sudan
ကောင်မလေးအဖမ်းခံပြီးအပြစ်ပေးခံခဲ့ ရတဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံမြို့ တော်
ခါတွန် ကဈေးတစ်ခုပေါ့ ....
The Omdurman market in Khartoum (file picture), one of the city's many markets. Silva Kashif was arrested as she walked toamarket near her home in the Khartoum suburb of Kalatla last week
ဆူဒန်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဒူးဆစ်အထိရှည်လျားသော စကတ်ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ မိခြင်းသည် အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် ( အစ္စလာမ်တရားဥပဒေအရ )
မတင့် တယ်၊ အမြင်မတော်ဖြစ်စေကြောင်း တရားသူကြီးတစ်ဦးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီးနောက် ကြိမ်
ဒါဏ်အချက် ၅၀ အပြစ်ပေးခဲ့ သည်ဟု သူမ၏မိသားစုက ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ အဆိုပါကောင်မလေးရဲ့ မိခင် Silva Kashif ကတော့ သူမရဲ့ သမီး
လေးကို အစ္စလာမ် ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေ Sharia Law အရ စီရင်ဆုံးဖြတ်၊အပြစ်ပေးခဲ့ ကြ
တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ အဆိုပါတရားသူကြီးကို တရားစွဲဆိုမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ သမီးဖြစ်သူကို ကြိမ်ဒါဏ်အပြစ်ပေးခဲ့ ပြီးမှ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုသိရှိခဲ့ ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ
က တရားရုံးအနေနဲ့ သူမတို့ မိသားစုရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားကိုလည်းထည့် 
သွင်းစဉ်းစားသင့် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...( အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူများကို အစ္စလာမ်
ဆူဒန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Yambio မြို့ မှာနေထိုင်ခဲ့ ကြတဲ့ မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ အဆိုပါကောင်မလေး
Kashif ဟာ မြို့ တော် Khartoum ရဲ့ဆင်ခြေဖုံးဒေသဖြစ်တဲ့Kalatla အရပ်ကဈေးအနီးမှာ
( ဒူးအထိအရှည်ရှိတဲ့ စကတ် ကိုဝတ်ဆင်ပြီး ) လမ်းလျှောက်နေခဲ့ စဉ်အဖမ်းခံခဲ့ ရတာလို့ ရိုက်
တာသတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
” သူမဟာ ကလေးမလေးအရွယ်သာရှိသေးပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးဟာ သူမကို ရာဇ၀တ်
သားတစ်ဦးလို ဈေးလမ်းတစ်လျှောက် ဆွဲခေါ်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်...ဒါဟာ အင်မတန်
မှ မလျော်ကန်၊ မသင့် မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်....” လို့Doro ကပြောခဲ့ ပါတယ်...
Khashif လေးကို Kalatla ဒေသဆိုင်ရာ တရားရုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ ပြီး အပြစ်ရှိကြောင်း
စီရင်ချက်ချကာ တရားသူကြီးရဲ့ မျက်မှောက်မှာပဲ အမျိူးသမီးရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦးက ကြိမ်
သမီးလေးကို ကြိမ်ဒါဏ်အပြစ်ပေးခဲ့ ပြီးမှပဲ အဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်မ သိရှိခဲ့ ရတာဖြစ်ပြီး
စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ ငိုကြွေးခဲ့ ရပါတယ်.... လူတွေမှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအမျိူးမျိူးရှိကြပြီး
သူတို့ အနေနဲ့ အဲဒါကိုတော့ ထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့် ကြပါတယ် လို့ သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ
ကောင်မလေးရဲ့ ရှေ့ နေဖြစ်သူ Azhari al-Haj ကတော့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ( ဥပဒေ
အရ အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ အသက်မပြည့် သေးတဲ့ ) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖမ်း
ဆီးအရေးယူ အပြစ်ပေးခဲ့ မှုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ တရားသူကြီးကိုတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်
ဥပဒေအရ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့် သေးသူများကို ကြိမ်ဒါဏ်အပြစ်မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ သူက
” သူမဟာ တစ်ခြားကောင်မလေးတွေအားလုံးဝတ်သလို သာမာန် စကတ်နဲ့ ဘလောက်စ်
အင်္ကျီကိုသာဝတ်ဆင်ထားခဲ့ တာပါ၊ အဲဒါကို သူတို့ ( ရဲနဲ့ တရားသူကြီး ) က မိဘအုပ်
ထိန်းသူကိုအကြောင်းမကြားပဲ ချက်ချင်းပဲဖမ်းဆီးပြီး၊ ချက်ချင်အရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့ လိုက်
ကြတာပါပဲ...” လို့ ရှေ့ နေကပြောပြပါတယ်...
သူ့ အနေနဲ့ ကလေးမလေးဟာ အခုလိုမှားယွင်းစွာအပြစ်ပေးခံရခြင်းအတွက်လျော်ကြေးရနိုင်ပြီး
သူမရဲ့ ပြစ်မှုမှတ်တမ်းမှလည်း ကင်းရှင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့် အနေ
နဲ့ အခုလိုစကတ်ဝတ်ဆင်မိတာနဲ့ တင် ကြိမ်ဒါဏ်အပြစ်ပေးတဲ့ ဥပဒေကိုလည်းသဘောမတူ
ဆန့် ကျင်ပါတယ်...အဆိုပါဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် လို့ ရှေ့ နေဖြစ်
ယခုလိုဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ အမှုကြောင့် ယခင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ ဆူဒန်အမျိူးသမီး
Lubna Hussein ကို အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာ ဘောင်ဘီအရှည်ဝတ်ဆင်ခဲ့ မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်း
သိမ်းခဲ့ မှု ကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ ကြရမှုအပေါ်မှာထပ်ပြီး အခြေအတင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာ
စာနယ်ဇင်းသတင်းထောက်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ အမျိူးသမီး Hussein ဟာ သူမအပြစ်ပေးခံခဲ့ 
ရတဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံရည့် အများပြည်သူအမြင်မှာမတင့် တယ်စေခြင်းဆိုင်ရာဝတ်စားခြင်း ဥပဒေ
ရဲ့ တရားမျှတမှုမရှိခြင်းနဲ့ မတရားအပြစ်ပေးခံခဲ့ ရခြင်းတို့ အတွက်စာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့ နဲ့ အဆိုပါ
အကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် သိရှိစေဖို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်...
သူမကို ကြိမ်ဒါဏ် အချက်လေးဆယ်အပြစ်ပေးဖို့ စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ 
ထိုအပြစ်ဒါဏ်ကို လျော့ ပေါ့ ပေးခဲ့ ပါတယ်...
အများပြည်သူအမြင်မတင့် တယ်အောင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ မူးယစ်ရမ်းကားမှု နဲ့ ပြည်သူကျင့် 
၀တ်ဆိုင်ရာဥပဒေချိူးဖောက်မှုတွေအတွက် ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေဟာ တော့အစ္စလာမ်တရားဥပ
ဒေနဲ့ စီရင်အုပ်ချူပ်တဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံ မြို့ တော် ခါတွန်မှာ တော့ သိပ်ပြီးအထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ 
ဒါပေမယ့်မြို့ တော်ခါတွန်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း
ဇာတိသားတွေ ကို အစ္စလာမ်ဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးအရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့ကြတာကတော့ အများစု
အတွက်လက်မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...
နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ မြောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ ပဋိပက္ခ ကိုပြေငြိမ်းခဲ့ တဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်း
ရေးသဘောတူညီချက်အရ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့တောင်ပိုင်းသားများကို အစ္စ
လာမ်ဥပဒေအရတရားစီရင်ခြင်းမပြုဖို့ ၊ အမှုအခင်းဖြစ်ခဲ့ ယင်လည်းသက်ညှာဖို့ ဆုံးဖြတ်
အဆိုပါသဘောတူညီမှုအရ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူများနဲ့ ရိုးရာဓလေ့ ယုံကြည်
ကိုကွယ်သူများအများစုနေထိုင်တဲ့ တောင်ပိုင်းဒေသမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဥပဒေ
Sharia Law ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ ပါတယ်...
အများပြည်သူအမြင်မတင့် တယ်စေရန်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဥပဒေဟာ တိကျရေရာမှုလုံးဝ
မရှိတဲ့ အတွက် ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းရဲတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုဝတ်စားဆင်ယင်တာဟာဖြင့် ဥပ
ဒေနဲ့ မညီညွတ်သလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အတွက်များစွာ အကြောင်းပြစေနိုင်တဲ့ အခွင့် 
အရေးတွေဖြစ်စေပါတယ်လို့ အမျိူးသမီးအခွင့် အရေးအဖွဲ့ က အကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ ပါ
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမား Stephen Worgu ကလည်းယခုလပိုင်း
မှာ သူဟာအရက်သေစာသောက်စားပြီး ကားမောင်းခဲ့ မှုနဲ့ ကြိမ်ဒါဏ် အချက် ၄၀ အပြစ်
ပေးဖို့ မှားယွင်းစွာစီရင်ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အခုအထိတော့ အဆိုပါစီရင်ချက်ဟာ အယူခံဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
A 16-year-old Sudanese girl was lashed 50 times afterajudge ruled her knee-length skirt was indecent, her family said today.
The mother of Christian teenager Silva Kashif said she is to sue police and the judge who imposed the sentence under Islamic shariah law.
Saying she only learned about her daughter's conviction after she had been lashed, mother Jenty Doro said the family's religion should have been taken into account.
Kashif, whose family comes from the south Sudanese town of Yambio, was arrested while walking to the market near her home in the Khartoum suburb of Kalatla last week, Doro told Reuters.
'She is justayoung girl but the policeman pulled her along in the market like she wasacriminal. It was wrong,' said Doro.
'I only heard about it after she was lashed. Later we all sat and cried ... People have different religions and that should be taken into account' she said.
Kashif's lawyer Azhari al-Haj said he was preparingacase against the police and judge for arresting and sentencing an under-age girl. He said according to the law, people under 18 should not be given lashes.
'She was wearinganormal skirt and blouse, worn by thousands of girls. They didn't contactaguardian and punished her on the spot.'
Al-Haj said he was hoping to win compensation and to clear Kashif's record. 'We are also against the law itself. We want the law to be changed.'
Hussein,aformer journalist who used her case to campaign against Sudan's public order and decency regulations, is touring France to publicise her book about the prosecution.
She had faced the maximum penalty of 40 lashes but was givenalighter sentence.
Arrests for indecency, drunkenness and other public order offences are not uncommon in Khartoum which is governed by Islamic sharia law.
Sudan is supposed to be working to soften the impact of sharia for southerners living in Khartoum undera2005 peace deal that ended decades of north-south civil war.
The deal lifted sharia law in the south, where most follow Christianity and traditional beliefs.
Posted by Unknown | at 11:29 AM | 1 comments
Identity ပျောက်နေတဲ့ ကျား....
တရုတ်နိုင်ငံမှ တိရိစ္ဆာန်ရုံတစ်ခုမှ ၀န်ထမ်းများဟာ သူတို့ ဆီမှာ ထိန်းသိမ်းပြသထားတဲ့ ကျား
တွေဟာ လှောင်အိမ်ထဲမှာ အစစအရာရာအဆင်သင့် ကျွေးမွေးပြုစုစောင့် ရှောက်ထိန်းသိမ်း
ထားခြင်းခံရလို့ ယဉ်ပါးလွန်းကာ သူတို့ အနေနဲ့ ကိုက်သတ်စားသောက်ရမယ့် ကြက်တွေ
ကိုတောင်မှ ကြောက်ရွံ့ နေတတ်ကြပါပြီလို့ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
Idenitiy ပျောက်တဲ့ ကျွန်တော်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ချူံကင်း သားရိုင်းတိရိစ္ဆာန် ဥယျာဉ်တွင် အရွယ်ရောက်ပြီးသောရှားပါးတိရိစ္ဆာန်
ကျားဖြူကြီး ငါးကောင်ကို လာရောက်ကြည့် ရှုသူများအတွက်ပြသအပန်းဖြေနိုင်ရန် သင်
တိရိစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ကျားများမူလတောရိုင်းဇာတိဗီဇစိတ်မပျောက်ရန် ကြက်အရှင်
များကို ကျားလှောင်အိမ်အတွင်းပစ်သွင်းပြီးကျွေးခဲ့ ပေမယ် အောင်မြင်မှုမရခဲ့ ပါဘူး....(ကျား
များက မစားခဲ့ ကြပါဘူး...)
ကျားစာကျွေးသူ Shi Ruqiang က ကျားတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်ဗီဇ အရ သူတို့ ဟာရိုင်းစိုင်းကြမ်းကြုတ်
ပြီးထိတ်လန့် စရာကောင်းရမှာဖြစ်ပေမယ့်ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်မွေးမြူတဲ့ သူတွေရဲ့ ပြုစု
စောင့် ရှောက်မှုနဲ့ သူတို့ တစ်တွေမတောင့် မတ၊ သက်တောင့် သက်သာ နေခဲ့ ရလို့ ပင်ကိုယ်
တောရိုင်းသဘာဝဗီဇတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပါပြီ...လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
” ကျွန်တော်ဟာ သူတို့ ကိုကြက်အရှင်တွေနဲ့ ပစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်....ဒါပေ
မယ့် ဗျာ...ရယ်စရာအတော်ကိုကောင်းပါတယ်....ကျားတွေဟာ ကျွန်တော်သူတို့ ကိုဖမ်းပြီးစား
ဖို့ ပစ်ပေးတဲ့ ကြက်တွေကိုကြောက်ပြီး အနီးအနားကိုတောင်မသွားရဲကြဘူးဗျာ...
( သဘာဝ ရဲ့ လှုံ့ ဆော်မှုအရ ) ကြက်တစ်ကောင်က ကျားတွေကိုကြောက်လွန်းလို့ သတိလစ်
မေ့ မြောသွားတယ်...အဲဒီကြက်ဆီကိုတော့ ကိုယ်တော်ချောကျားတွေကသွားပြီး နမ်းကြည့် ကြ
တယ်....ဒါပေမယ့် အဲဒီကြက်လဲ သတိရပြီးထအော်ရော ကျားတွေမှာပြေးလိုက်တာ တန်းနေတာ
ပါပဲ....” လို့ အဆိုပါ ၀န်ထမ်းကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
အခုတော့တိရိစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်းတွေဟာ ကျားတွေကိုလှောင်အိမ်ထဲကနေထုတ်ပြီး အပြင်မှာ တစ်
နေ့ ကို ၁၂ နာရီလောက်နေစေပြီး ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေပြန်ပြီး ရောက်ရှိစေရန်လေ့ ကျင့် ပေးနေရ
ပြီးတော့ သူတို့ ဟာ တစ်ကယ့် ကျားရိုင်းတစ်ကောင်ကို ခေါ်ဆောင်လာပြီး ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်
သလဲဆိုတာကို လက်ရှိယဉ်ပါနေတဲ့ ကျားတွေသိရှိနိုင်အောင် ပြသပေးဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်...
တစ်ကယ်လို့ အဲဒီလိုကြိုးပမ်းချက်တွေတစ်ခုမှ မအောင်မြင်ယင်တော့ သူတို့ ရဲ့ နေ့ စဉ်စားနေ
တဲ့ အစားအသောက်ကို လျှော့ ချရပါလိမ့် မယ်...ဒါမှ သူတို့ ဟာဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကိုခံစား
နားလည်လာပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်အစားအသောက်ကို ရှာဖွေစားသောက်တတ်လာပါလိမ့် မယ်
လို့ အဆိုပါဝန်ထမ်းကပြောဆိုခဲ့ ကြောင်းပါခင်ဗျာ...
အဲဒီသတင်းလေးဖတ်ပြီး နည်းနည်းတော့ အတွေးနယ်ချဲ့ မိတယ်ဗျာ....
တိရိစ္ဆာန်တွေတောင်မှ ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်၊ဗီဇနဲ့ ကင်းလွတ်ပြီးနေခဲ့ ယဉ် မူလဇစ်မြစ်
ကွယ်ပျောက်ပြီး ကိုယ်ဘာလဲ၊ ဘယ်ကလာတာလဲဆိုတာတောင်မေ့ တတ်ကြတယ်...
လူတွေလည်းဒီလိုပဲ....အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မိမိရဲ့ မူလနေထိုင်ရာ
ဒေသ၊နိုင်ငံကနေခွဲခွဲပြီးရပ်ဝေးမြေခြားမှာ ဘာသာခြား၊လူမျိူးခြား၊ ယဉ်ကျေးမှုခြားပြီးနေ
ကြရလေတော့ အခါအခွင့် သင့် တိုင်းမိမိတို့ ဘာသာ၊လူမျိူး၊တိုင်းပြည်ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်
စရိုက်လက္ခဏာများမပျောက်ပျက်ရအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်၊ ပြီး ရိုးရာယဉ်ကျေး
မှုပွဲလမ်း၊ အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကိုကျင်းပသင့် ကြောင်း ထင်မိပါတယ်...
ကိုယ်သက်သာယင်ပြီးစတမ်း အေးရာအေးကြောင်းနေယင်တော့ ....
အမျိူးပျောက်မှာ၊ စိုးကြောက်လှပါသည် လို့ ပဲ.....
Zoo-keepers in China say their tigers have grown so tame that they're frightened of the chickens they're supposed to eat.
The Chongqing Wild Animal Park has five rare adult white tigers which were originally trained to perform tricks for visitors, reports the Chongqing Morning Post.
Keepers have been trying to encourage them to follow their natural instincts by throwing them live chickens - but without success.
Feeder Shi Ruqiang said: They're supposed to be wild and scary, but due to their soft lifestyles and human care they have gradually lost their wild nature.
"I have been trying to interest them with live chickens but it was quiteafunny scene. The tigers were so scared that they wouldn't go near them.
"One chicken passed out and the tigers did eventually approach it - but then it woke up again and squawked and they ran for their lives!"
Shi says the keepers are now forcing the tigers to stay outside their cages for at least 12 hoursaday to toughen them up.
And they are planning to introduceawild tiger to show the domesticated big cats the ropes.
"If all else fails, we will simply cut down their rations until they are so hungry that they are forced to hunt for themselves," he added.
Posted by Unknown | at 11:50 AM |2comments
Labels: news: weird asia
တရုတ်နိုင်ငံက လူကြပ်သော မီးရထားဘူတာရုံများ
လူဦးရေ ဘီလီယံနှင့် ချီရှိသော တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရက်ရှည်အားလပ်ရက်များ၌ လူများ
သန်းနှင့် ချီပြီး မွေးရပ်မြေ၊ ဇာတိရပ်မြေသို့ ပြန်လေ့ ရှိကြရာ....
ထိုသို့ သော ဘူတာရုံများ ကိုမှ လူကြပ်သည်ဟု မခေါ်လျှင် အခြားဘယ်ဘူတာရုံများ
Millions of people in China are going home for holidays.
That's why the train stations are so overcowded.
And when I say overcowded I mean it .
Posted by Unknown | at 11:19 AM | 1 comments
Labels: photo : news
This man teaches mathematics at one Chinese school.
ကျောင်းဆရာ / ဆရာမ တွေရဲ့ ဘ၀ဟာ ဖယောင်းတိုင်လိုပါပဲတဲ့ ....
မိမိတို့ ရဲ့ အင်အား၊ စွမ်းအားများကို အစွမ်းကုန်အသုံးချပြီး တပည့် 
တွေကို တတ်စေချင်၊ တော်စေချင်တတ်ကြတာပါပဲ....
အဲဒါအပြင် နဂိုကမှ စိတ်နှလုံးနူးညံ့ သူဆိုယင်တော့တပည့် တွေအ
ခေတ်စနစ်ရဲ့ ဆိုးဝါးမှုတွေကြောင့် သာ ရွှေပြည်ကြီးက ဆရာ / ဆရာမ
တွေအနေနဲ့ငွေမျက်နှာကြည့် ကြရပေမယ့်သူတို့ တစ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ
လည်း စေတနာအရင်းခံတွေရှိကြမှာမလွဲပါဘူး...အများစုကပေါ့ ဗျာ...
တစ်ကယ်လိုများ ရတဲ့ လခနဲ့ စားဝတ်နေရေးသာလုံလုံလောက်လောက်
ရှိမယ်ဆိုယင်တော့ အသပြာဆရာဆိုတဲ့ နာမည်ဆိုးကနေ ယနေ့ ခေတ်
ဆရာအများစု လွတ်မြောက်မှာ အသေအချာပါပဲလို့ဆိုရဲပါတယ်...
အခုလည်းတရုတ်နိုင်ငံက တပည့် တွေအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းတဲ့ 
ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရား ကို ဓါတ်ပုံမှာတွေ့ နိုင်ပါတယ်...
တစ်နေ့ မှာသူနေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးရုံသွားပြတော့ ဆရာဝန်က အခြေ
အနေဆိုးလို့ ချက်ချင်းပဲဆေးရုံတက်ဖို့ အကြံပေးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် သူ့ တပည့် တွေခမျာ သူမရှိယင်သင်ခန်းစာတွေ လွတ်ကုန်မယ်...
သူ့ ဘာသာ ( သချာင်္ဘာသာကိုလည်း သူ့ လိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာပြသနိုင်
မယ့် ဆရာလောလောဆယ်ရှိပုံမရပါဘူး...) ကိုလည်းတစ်ခြားသူကအစား
ထိုးမပြနိုင်သေးလို့ သူမရှိယင်မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး ဆေးပုလင်းချိတ်ယင်းတန်း
လန်းနဲ့ စာဆက်သင်နေခဲ့ ပါတယ်...
ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဟာ၊ ဆရာပါပဲ....
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အာရှသားတွေပေါ့ ....
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကလည်းအခုလို တပည့် တွေအပေါ်တတ်စေချင်၊
တော်စေချင်လွန်းအားကြီးတဲ့ ဆရာများနဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့ ရပါသေးတယ်...
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် တစ်နှစ်လောက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်
များကိုအခမဲ့ သင်ပေးတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမူလတန်းကျောင်းမှာ ( တစ်
ကယ်တော့ တတ်နိုင်တဲ့ မိဘ တစ်ချိူ့ လည်းသူတို့ သားသမီးများကို
လာထားပါတယ်....ဘာသာ၊သာသနာနဲ့ လည်းနီးစပ်၊ စည်းကမ်းလည်း
ကောင်း၊ သင်ပေးသူတွေကလည်းတစ်ကယ့် စေတနာနဲ့ သင်ပေးတာ
များတာကိုး....)တစ်နှစ်လောက် ပညာဒါန ကလေးတွေကိုစာသင်ပေးခဲ့ 
ဖူးလို့ ဆရာတစ်ဦးရဲ့ သံယောဇဉ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်
Unbelievable, but this guy does his lessons under the dropper.
During his lesson, he didn’t feel good and went toahospital, where he was advised an immediate hospitalization.
But he refused, telling that his students would miss maths lessons and there was no one to replace him.
Asaresult, he did his lessons under the dropper.
I do not think it will end up very well for him though…
အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ ဆရာ.....
Posted by Unknown | at 9:31 AM |2comments
အိုမဲ့ အိမ်မဲ့ ၊ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ များ၏ဘ၀ကိုနားလည်နိုင်ရန်လမ်းဘေးမှာအိပ်တဲ့မင်းသားလေး....
Prince William sleeps rough in freezing back alley: But at least he hadaprotection officer to help him highlight plight of homeless
ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ နန်းညွှန့် အလောင်းအလျာ ရွှေမင်းသားလေးဝီလီယံ ( ကွယ်လွန်သူ ဒိုင်
ယာနာမင်းသမီးနဲ့အိမ်ရှေ့ မင်းသားချားလ်စ် တို့ ရဲ့ သားအကြီး ၊ ဗြိတိသျှ နန်းမွေဆက်
ခံမယ့် ဒုတိယမြောက်မင်းသား ) ဟာ လန်ဒန်မြို့ က အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ၊ လမ်းဘေးနေသူ
တွေရဲ့ ဘ၀၊ ရေခဲ လောက်အောင်အေးတဲ့ ခရစ်စမတ်ညကို ဘယ်လိုများဖြတ်သန်းကြ
ရသလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည် ကိုယ်ချင်းစာတတ်နိုင်ရန် လန်ဒန်မြို့ လမ်းဘေး
မှာတစ်ည အိပ်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
သူဟာ သုညအောက် ၄ ဒီဂရီအထိ အေးမြတဲ့ အအေးဒါဏ်ခံစားရင်း လန်ဒန်မြို့ လယ်
ရဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားတစ်ခုမှာ အမှိုက်ပုံးတွေခြံရံပြီး အိပ်စက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
Centerpoint အိမ်ခြေယာခြေမရှိသူများအတွက် ကူညီရေးအသင်းရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်
နာယကဖြစ်တဲ့မင်းသားလေးက သူ့ အနေနဲ့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှသူတွေအ
တွက် သူတတ်နိုင်တာလေး ကြိုးစားလုပ်ကြည့် ခဲ့ တာပါလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်...
အဲဒီညကတော့သူဟာ တစ်ခြားလမ်းပေါ်ကသူတွေနဲ့ သာတာဆိုလို့ သူ့ ကိုအဖော်
အဖြစ် သူ့ ရဲ့ လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးအရာရှိ၊ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူး နဲ့ အိုး
အိမ်မဲ့ များကူညီရေးအသင်း အမှုဆောင်အရာရှိချူပ် တို့ ကအတူနေပေးခဲ့ တာပဲရှိ
သူအိပ်ဖို့ အတွက် လုံခြုံရေး စိတ်ချဖို့ အတွက်လည်း မြို့ ရဲ့Blackfriar တံတားနား
က လူသူပြတ်တဲ့ နေရာကို ရွေးချယ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အခုလိုလမ်းဘေးမှာ နေခဲ့ တဲ့ အတွေ့ အကြုံရခဲ့ ပြီမို့ သူ့ အနေနဲ့ လမ်းပေါ်က လူတွေ
ရဲ့ ဘ၀ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ သိရှိနားလည်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ မင်းသားလေးကဆိုခဲ့ 
ယနေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ တဲ့ သူ့ ရဲ့ ကြေငြာချက်ထဲမှာ အသက် ၂၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေမင်းသား
လေးက လန်ဒန်မြို့ လမ်းပေါ်မှာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀နဲ့ လူတွေဘယ်လိုများနေထိုင်
အိပ်စက်နေနိုင်ပါ့ မလဲဆိုတာ အခုလိုတစ်ည လေးနေမိယုံနဲ့ ကို မတွေးရဲစရာ သိရှိခဲ့ ရ
ပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
” ကျွန်တော်အခု ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့Centerpoints အဖွဲ့ အနေနဲ့ တစ်ခြားသော
အဖွဲ့ အစည်းများစွာနဲ့ လည်း အိုးအိမ်မဲ့ သူများရဲ့ အခြေအနေဆိုးမှ လွတ်မြောက်ရေးအ
တွက်ကျိူးစားလုပ်ဆောင်နေရာမှာ အခုလို သူတို့ တွေရဲ့ ဘ၀ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်လာ
လို့လမ်းပေါ်ကလူတွေကို ကျွန်တော့ အနေနဲ့ ပိုမို စာနာနားလည်ပြီး၊ ကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါ
တယ် .....” လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အမှိုက်ပုံးတွေဝိုင်းထားတဲ့ နေရာမှာအိပ်ခဲ့ တယ်....
ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ အားကစားဖိနပ်၊ ခေါင်းစွပ်အနွေးဆွယ်တာအကျီနဲ့ သိုးမွေဦးထုပ်တို့ 
၀တ်ဆင်ထားတဲ့ မင်းသားဟာလွန်ခဲ့ တဲ့ အင်္ဂါနေ့ ညက လမ်းပေါ်မှာ ကတ္ထူစက်ကူပြား
ကိုခင်းပြီး ညအိပ် အိတ်ထဲဝင်ပြီးအိပ်စက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဗြိတိသျှ စစ်တပ်ထဲမှာအရာရှိအဖြစ် လေ့ ကျင့် သင်တန်းဆင်းခဲ့ တဲ့ သူမို့ သူ့ အတွက်
တော့ သိပ်ပြီးခက်ခဲ ပင်ပန်းလှတဲ့ အတွေ့ အကြုံသစ်ဖြစ်လိမ့် မှာမဟုတ်ပါဘူး...
ဒါပေမယ့် အပူချိန်က သုညအောက်ရောက်အောင်ကို ကျဆင်းအေးစက်နေတာမို့ အိပ်
ပျော်ဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တာမို့ သူ့ အတွက်တော့ သက်တောင့် သက်သာမရှိစေတာ
အိုးအိမ်မဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးခေါင်းဆောင် Mr Obakin က တော့မင်းသားက သူ့ 
အနေနဲ့လေလွင့် လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ ကိုနားလည်ကူညီနိုင်ဖို့ သူ ဘာများလုပ်ပေးနိုင်
ပါသလည်းလို့ မေးခဲ့ ပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်...
ပြည်သူချစ်တဲ့ ရွှေမင်းသားနဲ့သူနေလေ့ ရှိတဲ့နေအိမ်....
” အဲဒီတော့ ကျွန်တော် သူမလုပ်နိုင်ဘူးထင်တဲ့ ဟာကို စဉ်းစားပြီးတမင်တကာပြောခဲ့ 
တာဖြစ်ပါတယ်....ဒါပေအံ့ သြစရာပါပဲ...သူက လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဖြေခဲ့ တာပါ...” လို့ 
အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှလုံခြုံမယ့် နေရာ၊ လူသူကင်းဆိတ်တဲ့ နေရာကိုရှာခဲ့ ရပြီး
အခုလို အမှိုက်ပုံးတွေ ရှိတဲ့ အကာအကွယ် အနည်းငယ်ရတဲ့ နေရာကိုတွေ့ ရှိခဲ့ တာ
”ဒါပေမယ့် ဆိုးဝါးပြင်းထန်လှတဲ့ အအေးဒါဏ်နဲ့အေးစက်မာကြောတဲ့ ကွန်ကရစ်ကြမ်း
ပြင်နဲ့မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူတွေ၊ ပြည့် တန်ဆာများနဲ့ ပျော်ပါးဖို့ မြှူဆွယ်သူတွေ
လာရောက်နှောက်ယှက်နိုင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ခြေယာခြေမရှိလို့ ဆိုပြီး စာနာချင်း
ကင်းမဲ့ သူတွေကလာရောက် ကန်ကြောက်နိုင်တာတွေကိုတော့ အပြည့် အ၀ကြီးမ
ကျွန်တော့် အတွက်တစ်ညမှ အဲဒီညလောက်စိတ်ချမ်းသာ၊ပျော်ရွှင်ခဲ့ တာမရှိခဲ့ ပါဘူး...”
လို့ သူကဆက်ပြီးပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီနေ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မင်းသားလေးဟာ ဘုရင်မကြီးနဲ့ အတူ မိသားစုခရစ်စ
မတ် နေ့ လည်စာကို ဘတ်ကင်ဟမ် နန်းတော်မှာ သွားရောက်ပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ညတာကုန်ဆုံးပြီး နံနက်ခြောက်နာရီမှာတော့ ဝီလီယံဟာ အိပ်ယာအိပ်ကို ခေါက်
သိမ်းပြီး လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားကာ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ နေသူတွေနဲ့၄၅ မိနစ်လောက်
အဲဒီနောက်သူဟာ Greek လမ်းက Soho အဆောက်အဦ မှာရှိတဲ့Centerpoints
အဆောင်ကိုသွားရောက်ကာ ရေမိုးချိူးပြီး အဆောင်နေသူအချိူ့ အတွက် နံနက်စာကို
စီစဉ်ချက်ပြုတ်ပေးကာအဖွဲ့ ရဲ့ နှစ်လေးဆယ်မြောက်အခမ်းအနားအထိမ်းအမှတ်ကိတ်
မုန့် လှီးခဲ့ ပါတယ်....
ဒါပေမယ့် သူဒီနေ့ သိရှိနားလည်ခဲ့ တာကတော့ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဘ၀တွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်
ပိုင်းမျှလောက်ပဲ ရှိပါလိမ့် ဦးမယ်...
Blackfriars အရပ်က လမ်းပေါ်မှာအိပ်စက်နေရလေ့ ရှိတဲ့ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ
Carl Hughes ကတော့ မင်းသားလေးရဲ့ အားထုတ်မှုကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်...
မင်းသားလေးအနေနဲ့ တစ်ခြားသူတွေဘယ်လိုများနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာ လေ့ လာ
ကြည့် လို့ သူဟာ တစ်ကယ့် ကို လူကောင်းတစ်ဦးပါ...
လမ်းပေါ်ကလူတွေဘ၀ ကိုတစ်ရက်ထဲနဲ့ ပြည့် စုံအောင်မလေ့ လာနိုင်ပေမယ့် လက်
ရှိသူတို့ တစ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာအခက်အခဲတွေကို သိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ အ
တွက် အကူအညီအထောက်အပံ့ တော့ ဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ...
သူဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် သူ့ မိခင် ဒိုင်ယာနာမင်းသမီးနည်းတူ ဆင်းရဲသားလူ
ထုကြီးရဲ့ ကရုဏာနဲ့ မေတ္တာကို ရမှာကတော့ သေချာပါတယ်...
သူ့ ဖခင်ထက်တောင် လူချစ်လူခင်ပိုများပါလိမ့် ဦးမယ်....
သူများတိုင်းပြည်များက ဘုရင်ဖြစ်မှာ သေချာသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ ( မွေးရာပါအခွင့် 
အရေးကကို ဘုရင်ဖြစ်ရမှာနော်....) ပျိူတိုင်းကြိုက်တဲ့ ရွှေမင်းသားလေးတောင် ခက်
ခဲပင်ပန်းတဲ့ စစ်သင်တန်းတွေတက်၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အိမ်ခြေ၊ ယာခြေမဲ့ နေသူတွေ
ရဲ့ ဘ၀ ကို ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်အောင် လမ်းဘေးမှာ အတူဒုက္ခ ခံပြီး အိပ်စက်နေတဲ့ 
ရွှေပြည်ကြီးက ကံအကြောင်းသင့် လို့ သမုဒ္ဒရာထက် ရေပွက်ပမာ နေရာလေးကိုခဏ
ရောက်နေသူ လူငယ်လေးကတော့ ပျော်လို့ မဆုံး...ရမ်းကားလို့ မဆုံး .....
'But there was no shielding from the bitter cold, or the hard concrete floor, or the fear of being accosted by drug dealers, pimps or those out to give homeless peopleakicking. I have never been happier to welcome the break of dawn!' After sleeping fitfully, William rolled up his sleeping bag at 6am and walked through the streets for 45 minutes, stopping to talk to several homeless people on the way.
Posted by Unknown | at 11:49 AM | 1 comments
'GiantGeorge' the 7ft-long blue great dane who could be the world's tallest dog
ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံးခွေးကြီး...
အမယ်မင်း ကြီးလိုက်တဲ့ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်.
ခြေထောက်မှ ပခုံးအထိ အမြင့် လေးပေရှိသော ခွေးကြီးဂျော့ ခ်ျ ဟာ ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးခွေးကြီး
တစ်ကောင်ဖြစ်နေပါပြီ... သူ့ ရဲ့ ကြီးမားထွားကြိုင်းလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့် သူ ဟာ မြင်းပေါက်တစ်ကောင်အလား
နှာခေါင်းကနေ အမြီးဖျားအထိ ၇ ပေ နှင့်၃ လက်မ အရှည်ရှိပြီး အလေးချိန် ၂၄၅ ပေါင်
( ၁၁၁ ကီလို ) ရှိတဲ့ ဧရာမ ခွေးကြီးဂျော့ ခ်ျ ဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ သြဂုတ် လကသေဆုံးသွားခဲ့ တဲ့ 
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးခွေးကြီး ဂစ်စဘွန်း ဆီကနေ အမြင့် ဆုံးခွေးဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ထူးကိုလွှဲပြောင်းရယူဖို့ 
အသင့် တော်ဆုံး ဖြစ်နေပါပြီ...
မြင်းပေါက်တစ်ကောင်အလား ကြီးမားထွားကြိုင်းလွန်းတဲ့ ခွေးကြီးနဲ့ သခင်ဖြစ်သူ....
ယခုတော့ ခွေးကြီးရဲ့ ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ တပ်စ်ကွန်မြို့ က
ဒေးဗစ်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခရစ်စတင်း တို့ ဟာ ကမ္ဘာ့ စံချိန်မှတ်တမ်းအဖွဲ့ ဂီးနစ် မှတ်တမ်းအဖွဲ့ ရဲ့ တရား
၀င်မှတ်တမ်း အတည်ပြုဖို့ ကိုပဲစောင့် နေကြပါပြီ.....
” ဒီကောင်ကြီးဟာ တစ်ကယ့် ကိုထူးခြားပါပေတယ်....ခွေးကြီးဂျော့ ခ်ျ ဟာ တစ်လကို မယုံနိုင်
လောက်စရာ အစားအစာ ပေါင် ၁၁၀ စားသောက်ပြီး သူတစ်ကောင်တည်းပဲ အိပ်ယာကြီးတစ်ခု
ပေါ်မှာ အိပ်ပါတယ်....” လို့ ဒေးဗစ် ကပြောပြပါတယ်...
ဒေးဗစ် နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ခရစ်စတင်း တို့ ဟာ ဘီယာဆိုင်လေးဖွင့် ပြီး နေထိုင်စားသောက်ပြီး ဒီခွေး
ကြီးကိုမွေးခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူတို့ အနေနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ခွေးကြီး ဒီလောက်အထိ ကြီးမားထွားကြိုင်းလာ
လိမ့် မယ်လို့ မမျှော်လင့် ခဲ့ ကြပါဘူး လို့ ဆိုပါတယ်...
ပထမတော့ သူတို့ ဟာ ခွေးကြီးကိုသူတို့ နဲ့ အတူ တစ်ခန်းထဲ၊ အိပ်ယာပေါ်မှာ အတူတူအိပ်ခဲ့ 
ကြပေမယ့်နောက်ပိုင်း ခွေးကြီးအဆမတန်ထွားကြိုင်း လာတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာ အတူအိပ်ဖို့ 
မဖြစ်နိုင်တော့ လို့ အခန်းထဲကနေ ခွဲထုတ်ပြီး သီးခြားနေစေခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
တပ်စကွန်မြို့ ၊ Buena တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုခန်း က တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ၀ီလီယံ ၀ါလေ့ စ်
ကတော့ သူ့ ရဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်သက်တမ်း ၄၅ နှစ်အတွင်း အိမ်မွေးခွေးကြီးတွေ ကုသ
ခဲ့ တဲ့ အတွေ့ အကြုံအရတော့ဒီခွေးကြီးဂျော့ ခ်ျလောက် ကြီးတဲ့ ခွေးတစ်ခါမှ မတွေ့ ဖူးဘူးလို့ 
ဒေးဗစ် ကတော့ သူ့ ခွေးကြီးကို ကမ္ဘာ့ စံချိန်မှတ်တမ်းအတွက် မှတ်တမ်း၊ မှတ်ရာတွေ တင်ပြဖို့ 
ပြင်ဆင်နေသလို့ တစ်ခြားသော ခွေးပိုင်ရှင်များကလည်း သူတို့ ရဲ့ ခွေးကြီးများ ဒီအကြီးဆုံးမှတ်
တမ်းစံချိန် တင်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်....
အခုလို သူ့ ခွေးကြီးအတွက်စံချိန်မှတ်တမ်း နောက်ဆုံးအဖြေစောင့် နေချိန်အတွင်း သူ့ ရဲ့ နာမည်
ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ ခွေကြီးအတွက် facebook နဲ့twitter အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ခွေးကြီး
ကိုချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်များအတွက် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းစာမျက်နှာများဖွင့် ပေးပြီး အလုပ်များ
STANDING nearly FOUR FEET from paw to shoulder giant George could be the world's tallest dog.
The massive pooch, who measures 7ft 3ins from nose to tail and weighsastaggering 245lb (111kg), could beaprime contender to take the title from former record holder Gibson, who died in August.
Now David and wife Christine, of Tucson, Arizona, are awaiting confirmation from Guinness World Records to see if he has achieved the lofty feat.
David said: "He's very, very unique."
George eats an unbelievable 110lb of food every month, and sleeps alone in his own QUEEN SIZE bed.
David and Christine raised him fromaseven-week-old pup, but never expected him to grow so big.
The couple eventually had to evict him from their king size bed, when he grew too large for the three of them to share the same sheets.
David is currently preparing the necessary documentation for Guinness, but other dog owners are also coming forward to claim the record.
As they wait for the results to come through, George is busy occupying himself with his new-found stardom — and even hasaFacebook fan page and Twitter accounts for his adorning fans.
Posted by Unknown | at 12:16 AM |2comments
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးဟာ သူ့ ရဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုပုံမှန်လာရောက်
၀တ်ပြုဆုတောင်းသူ နောက်လိုက်တပည့် များကို စီးပွားရေးကြပ်တည်းချိန် အဆင်မပြေပါဖြစ်
နေပါက ဈေးဆိုင်များမှ အလစ်သုတ်ခိုးယူကြရန် သြ၀ါဒပေး ဆုံးမတိုက်တွန်းခဲ့ သဖြင့် အပြင်း
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ယော့ ခ်မြို့ ၊ စိန့် လောရင့် စ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်သူ အသက်
၄၁ နှစ်ရှိ ဖာသာ တင်မ်ဂျူံးစ် က ဈေးဆိုင်၊ စူပါမားကက်များမှ အလစ်သုတ်၊ ခိုးယူခြင်းဟာ ၀င်
ငွေနဲ့ ထွက်ငွေမမျှဖြစ်နေသူ လူဆင်းရဲများအတွက် သူများအိမ်တွေကို ဖောက်ထွင်းခိုးယူတာ၊
အခကြေးငွေရယူပြီး လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပြည့် တန်ဆာအဖြင့် လုပ်တာတွေထက် ပိုပြီး အဆင်
ပြေ၊ အသင့် တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထား
” သင်တို့ ရဲ့ ဆရာ ဘုန်းတော်ကြီးအနေနဲ့ အကြံပြု ပြောရမယ်ဆိုလျှင် ဈေးဆိုင်တွေကနေ အ
လစ်သုတ်ပြီး အလိုရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မ , သွားကြပါ လို့ ပြောချင်ပါတယ်....” လို့ တနင်္ဂနွေ
နေ့ ပုံမှန် ၀တ်ပြုဆုတောင်း၊ တရားပွဲ မှာပြောကြားခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါသည်...
” ကျွန်ုပ် အနေနဲ့ အခုလို ဈေးဆိုင်၊ စူပါမားကတ် ၊ ကုန်တိုက်ကြီးတွေကနေ အလစ်သုတ် ခိုး
ယူဖို့ တိုက်တွန်းရတာဟာ သူတစ်ပါးပစ္စည်းမပေးပဲ ခိုးယူခြင်းဟာကောင်းလို့ ၊ အပြစ်မရှိတဲ့ 
အမှု ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ မဟုတ်ပါဘူး....”
”ကျွန်ုပ်က တပည့် များကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အသေးစား၊ အငယ်စားလေးတွေ
ရဲ့ ဆိုင်တွေကနေ ခိုးယူခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး... ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၊ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်
ကြီးတွေကနေ ကြုံသလို မ , ခိုင်းတာပါ....”
”အဲဒီလိုဆိုတော့ ပျောက်ဆုံးတာ၊ ဆုံးရှုံးတာတွေအတွက် ကုန်ဈေးနှူန်းတွေမြှင့် ပြီး ပြည်သူအား
လုံးက ပြန်လည် ကျခံတဲ့ သဘောကျရောက်သွားတာဖြစ်လို့ အခုလို အကြံပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...”
ဟု သင်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးက ဆက်ပြောပြပါသည်....
” ပြီးတော့ ကျွန်ုပ်က သူတို့ ကို လိုအပ်တာထက် ပိုမယူဖို့ ကိုလည်း ပြောခဲ့ ပါသေးတယ်...
အခုလို ဟောပြောတိုက်တွန်းချက်ဟာလည်း သမ္မာကျမ်းစာလာပညတ်တော်ရဲ့ နံပါတ်ရှစ်အချက်
ဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ လူဆင်းရဲတွေအတွက် အကြွင်းမဲ့ မေတ္တာတော်နဲ့အလွန်အမင်း
ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတွေ အပေါ် စက်ဆုပ်ရွံ့ မုန်းမှု ဆိုတဲ့ အချက်အလက်အကြောင်းအရာနဲ့ မ
ဆန့် ကျင်ပါဘူး...” လို့ လည်း သူ ကဆက်လက်မိန့် ကြားခဲ့ ပါသည်...
သို့ သော် ဖာသာဂျူံးစ် ရဲ့ တရားတော်ကိုတော့ ဒေသခံလွှတ်တော်အမတ်နှင့် ၊ ဗြိတိသျှ နိုင်ငံ
လက်လီလက်ကား အသင်းအဖွဲ့ တို့ အပြင် ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပါ အခုလိုဈေးဆိုင်များကပစ္စည်းများကို
အလစ်သုတ်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိူးမှာပဲလုပ်လုပ် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမျှသာဖြစ်
တယ်လို့ ဆိုကာ အပြင်းအထန် ဝေဖန်အပြစ်တင်ခဲ့ ပါတယ်...
ဖာသာကြီးလည်း လူဆင်းရဲတွေကို အသနားလွန်သွားတယ်နဲ့ တူတယ်....
တော်ကြာ ခေတ်သစ်ရော်ဘင်ဟု များဖြစ်နေဦးမယ်...
အဲဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိူးပဲ အခုရွှေပြည်ကြီးနဲ့အွန်လိုင်းမှာ အငြင်းပွားနေတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီ
သမားတွေကလည်း နိုင်ငံတော်ပိုင် ပစ္စည်းတွေ ခိုးယူယင် ခိုးမှုမရောက်ဘူးလို့ အဆန်းထွင်
၀န်ထမ်းအများစုကလည်း ဒီလိုအခြေအနေမျိူးရောက်နေတော့ ဒီလိုဟောမှပဲ နောက်လိုက်
နောက်ပါ၊ လှူမယ့် သူတွေ များများစားရဖို့ ရှိတယ်ပေါ့ ဗျာ...
ကဲ ဗီဒီယိုကလစ်လေးပါကြည့် လိုက်ပါဦး....
ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုသတင်းလေးပါ.... A priest in Britain is under fire Monday for advising his congregation to shoplift in tough economic times, the Daily Mail reports. Father Tim Jones,a41-year-old clergyman at St. Lawrence Church in York, England, said that shoplifting — rather than prostitution or burglary — is sometimes the best option for poor people struggling to make ends meet, according to the Web site."My advice asaChristian priest is to shoplift," Jones reportedly told churchgoers during his Sunday sermon. "I do not offer such advice because I think that stealing isagood thing, or because I think it is harmless, for it is neither." "I would ask that they do not steal from small family businesses, but from large national businesses — knowing that the costs are ultimately passed on to the rest of us in the form of higher prices," he continued. "I would ask them not to take any more than they need, for any longer than they need ... My advice does not contradict the Bible's eighth commandment because God's love for the poor and despised outweighs the property rights of the rich." Jones' sermon, meanwhile, has been blasted by police, the British Retail Consortium andalocal MP who all say that shoplifting isacrime regardless of circumstances.
Posted by Unknown | at 12:19 PM | 1 comments
Labels: news: foxnews
လူတိုင်းလူတိုင်းနီးပါးဟာ မိမိတို့ တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ( တစ်ချိူ့ လည်းတစ်ခါမကပေါ့ )
လုပ်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို အများနဲ့ မတူပဲ ထူးထူးခြားခြားတော့ အတတ်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်တတ်
လူတစ်ကိုယ်စိတ်တစ်မျိူးစီမို့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးတော့ အကြိုက်ချင်းမတူလေတော့ မင်္ဂ
လာပွဲကျင်းပတဲ့ နေရာ၊ ကျင်းပပုံချင်းလဲမတူပေဘူးပေါ့ ...
Falling for you ...acouple abseil as they wed
ဒီမင်္ဂလာမောင်နှံကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ကအထပ်မြင့် တိုက်တွေရဲ့ 
ပြတင်းမှန်သန့် ရှင်းရေးလုပ်သားတွေမို့ သူတို့ မင်္ဂလာပွဲကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရဖြစ်
အောင် သတို့ သား ကျန်းဒေကျန်းအသက် ၂၇ နှစ် နဲ့သတို့ သမီးတိုင်းဂွမ်ဂျူး ၂၆
နှစ်တို့ ဟာ သူတို့ အလုပ်လုပ်နေကျ အထပ်မြင့် တိုက်ရဲ့ အပေါ်အပြင်ပိုင်းကနေ
လျှောဆင်းလာတဲ့ ပုံက နတ်ပြည်ကနေနတ်သားနတ်သမီးလေးတွေ ဆင်းလာသ
Jiang Dezhang, 27, wed sweetheart Tie Guangju, 26, while abseiling fromabuilding they both clean foraliving in China's Yunnan province.
Weird weddings ... the mini marathon
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟိုင်နန်ပြည်နယ်က မင်္ဂလာသတို့ သားများကတော့ သူတို့ ရဲ့ ချစ်ဇနီး
သတို့ သမီးတွေကိုကျောပိုးပြီး ပြေးကြတဲ့ နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာပွဲပါတဲ့ ...
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ကပြုလုပ်ခဲ့ ကြတာပါ...
YOU often hear of grooms doingarunner ... but rarely withabride on their back.
These snaps from January 2007 show grooms carrying their brides duringamini marathon celebrating the New Year in China's Hainan province.
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေအတိုင်း...
the Stars Wars fans
ဒီစုံတွဲကတော့သူတို့ အကြိုက်ဆုံး စတားဝါး ဇတ်ကားထဲက ၀တ်စုံတွေဝတ်ပြီးသူ
တို့ စိတ်ကူးထဲက ဇတ်ကောင်တွေအတိုင်း ပုံဖော်ခဲ့ ကြပါတယ်...တက်ရောက်လာ
သူများကိုလည်း ဇတ်ကားထဲကသူတွေအတိုင်းဝတ်စား ထားလာစေခဲ့ ပါသေးတယ်...
MAY the force of true love be with you!
Tenille Kuhlman, 30, and Thomas Kuhlman, 39, exchanged vows ataSan Diego comic convention in 2008.
The wedding ceremony, based on the language, costume and lore ofafictional Mandalorian race was attended by members of their close-knit Star Wars fan club.
အေးချမ်းသာယာမယ့် နမိတ်ပေါ့ ....
Weird weddings ... the ice chapel
စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ သူတို့ အတွဲ...
ဒါကတော့ အေးချမ်းသာယာပါစေနိုင်ကြောင်း အတိတ်နမိတ်ကောင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ
က ရေခဲ့ နေတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ အချစ်ထူးသူနှစ်ဦးရဲ့ ထူးထူး
WHATan-ice couple!
A couple exchange their vows inafrozen chapel in Japan on6February, 2008.
ချစ်သူ ကိုအဆင့် မြင့် မြင့် လက်ထပ်ပေးတာ...
Weird weddings ... 40ft in the air
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံက ဝေယံထက်မှာ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွဲချင်တဲ့ မောင်နှံကတော့ယခင်
စစ်စခန်းဟောင်းတစ်ခုမှာ ကောင်းကင်ကနေ အမြင့် မီတာ ၄၀ က တွဲလောင်းကျနေ
တဲ့ စင်မြင့် ထက်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလက ကျင်းပခဲ့ တဲ့ မိုးမြင့် ပင်ယံ
THE sky's the limit for these lovebirds.
Belgium's Sandra Eens and Jeroen Kippers got married onaplatform hanging 40m above the ground ataformer military base in October 2008.
သူများနဲ့ မတူ ....ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်...
Weird weddings ... the weightless one
ဒီပွဲကတော့လေထုဖိအားမရှိတဲ့ လေဟာနယ်အဖြစ်ဖန်တီးထားတဲ့ ဘိုးအင်း ၇၂၇
လေယာဉ်ကြီးပေါ်မှာ ဦးစိုက်ပြောင်းပြန်လန်အောင် လွင့် မျောပြီးကျင်းပခဲ့ တဲ့ ကမ္ဘာ့ 
ပထမဦးဆုံး အလေးချိန်မဲ့လေဟာနယ်ထဲက ချစ်ပုံပြင် လက်ထပ်ပွဲပါတဲ့ ...
သူတို့ မင်္ဂလာပွဲကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဖလော်
ရီဒါပြည်နယ် ကနေ လေယာဉ်ပျံကြီးနဲ့ ပျံသန်းထွက်ခွာခဲ့ပြီးကျင်းပခဲ့ ကြတာပါ...
NOBODY could say this wedding lacked atmosphere ... or could they?
New Yorkers Erin Finnegan and Noah Fulmor floated upside down during the world's first weightless wedding aboardaspecially-equipped Boeing 727.
The pair flew over the Gulf of Mexico after taking off from Titusville, Florida on 20 June, 2009.
သူမကတော့ ချစ်သူ ကိုကို အာကာသယာဉ်မှူး အာကာသထဲကပြန်ရောက်လာယင်
စိတ်ပြောင်းသွားမှာစိုးလို့ နဲ့ တူတယ်...
ဟိုမောင် အာကာသထဲမပြန်မရောက်ခင် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူဖန်တီးပြုလုပ်၊ဖြတ်
ညှပ်ထားတဲ့ပုံစံတူ အရုပ်နဲ့၂၀၀၃ ခုနှစ် သြဂုတ် လမှာမင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်
ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ....
သတို့ သား Yuri Malenchenko နဲ့သတို့ သမီး Ekaterina Dmitriev တို့ ဟာ
တက္ကဆက်ပြည်နယ် က အမေရိကန်အာကာသသိပ္ပံအုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ ရဲ့ ဌာနချူပ်မှာ
သတို့ သားက လူကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်ပေမယ့် အာကာသကနေ ဂြိုလ်တု
ဆက်သွယ်ရေးစနစ်အသုံးပြုပြီး မိသားစုနဲ့ စကားပြောနေကျအချိန်မှာပဲ၊ အချိန်ကိုက်
ပြီး ကတိသစ္စာပြုခဲ့ ကြပါတယ်...
THIS bride is no dummy ... but her groom is.
Ekaterina Dmitriev poses here withalife-size cut-out of her bridegroom, Yuri Malenchenko, following her satellite wedding to the orbiting space station Commander in August 2003.
The state of Texas allows weddings where one party is absent and the pair exchanged vows via satellite hook-up at NASA during weekly designated family teleconference time.
လူတွေဟာသူတို့ တင်စိတ်ကူးယဉ်လို့ အားမရနိုင်ကြပဲ သူတို့ ရဲ့ အချစ်တော် အိမ်
အဲဒီလို ကြံကြံဖန်ဖန်မင်္ဂလာဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ ယုန် တို့ ကြက်တို့ လို တိရိစ္ဆာန်
Weird weddings ... passionate pooches
IT must be ruff
ခွေးပုစုတ်ဖွားလေးတွေဖြစ်တဲ့ရမ်ဘို နဲ့ဂျိူစီတို့ဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ
လပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ချစ်သူများနေ့ အထိန်းအမှတ် သူတို့ ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲကိုရောက်လာ
Minature poodles Rambo and Josie attend their wedding ceremony to mark Valentine's Day in Bangkok on February 10, 2003.
Many 'newlywed' animals including rabbits, roosters and hens attended the event.
Cold blooded couple
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုချာကန်ဒါ မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ပန်းတွေနဲ့ ဝေနေတဲ့ ဖား
ပြုတ် ဇနီးမောင်နှံပါတဲ့ ...
ယနေ့ မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်ကွယ် လို့ များ မင်္ဂလာသီချင်းဆိုပြီးလက်ဖွဲ့ လေဦးမလားပဲ....
TOAD-AY is the first day of the rest of their lives together!
Indian villagers hold two toads decorated with flowers and vermilion during their 2005 wedding ceremony at Khochakandar in India.
Locals held the ceremony to please the rain gods and endadry spell.
မျောက်တို့ ၏ မာယာ.....
Weird weddings ... monkey love
တစ်ချက်လေးမှ ဂဏှာမငြိမ်အောင် စိတ်ကစားကာ ဆော့ ကစားတတ်တဲ့စိန်
မျောက်မျောက်ကိုတော့သူ့ ရဲ့ မျောက်ယောက္ခမလောင်းကြီးက သူတို့ သမီး
မျောက်မူးလဲ မမ နဲ့ သဘောတူပါ့ မလားပဲ...
စိန်မျောက်မျောက် ၀ူခုန်း နဲ့သူ့ ရဲ့ ချစ်သဲ ရှောင်ယ တို့ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံZhejiang
ပြည်နယ်က Wenling မြို့ က တိရိစ္ဆာန်ရုံမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်
နေ့ က အထူးမင်္ဂလာဧည့် ခံပွဲကို ဆင်ယင်ကျင်းပခဲ့ ကြပါသတဲ့ ....
တိရိစ္ဆာန်ရုံက တာဝန်ရှိသူတွေက ဦးစီးကျင်းပခဲ့ တဲ့ အဆိုပါပွဲကတော့ လာရောက်
ကြည့် ရှုသူတွေကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အကျွေးအမွေးကတော့ စိန်မျောက်မျောက်တို့ မင်္ဂလာမောင်နှံအကြိုက်ဆုံးအစား
အစာ ငှက်ပျောသီး ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်...
WE wonder if this nervous fella meets with his new mother-in-law's ape-roval.
Wukong wed his sweetheart Xiaoya duringaspecial ceremony atazoo in Wenling, Zhejiang province on September 4, 2008.
The zoo organised the bash to attract more visitors. They must be bananas!
Weird weddings ... the love bug
အသည်းယားစရာ ကင်းမြီးကောက်ချစ်သူ စုံတွဲရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကလည်း တစ်မူထူးပေ
ထိုင်းနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းခြေ အနားယူရာမြို့ ဖြစ်တဲ့ ပတ္တရားမြို့ မှာ KanJana
Ketkaew ၃၅ နှစ်နဲ့Bunthawee Sengwong ၂၉ နှစ်တို့ ဟာ မြင်သူတွေအသည်း
ယားလောက်တဲ့ သူတို့ အချစ်တော် ကင်းမြီးကောက်တွေကို တန်ဆာဆင်ပြီး လက်
အမျိူးသမီးဖြစ်သူ Kanjana ကတော့ကင်းမြီးကောက်ပေါင်း ၃၄၀၀ ကောင်နဲ့ ၃၂
ရက်တိုင်တိုင် လှောင်အိမ်ထဲမှာ နေပြခဲ့ ပြီးကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်ခဲ့ သလို ခင်ပွန်းဖြစ်သူ
Bunthawee ကလည်း ကင်းခြေများပေါင်း အကောင် ၁၀၀၀ နဲ့ လှောင်အိမ်ထဲမှာ
၂၈ ရက်ကြာအောင်နေပြီး ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်ခဲ့ ပါတယ်...
THESE two have caught the love bug ... andacouple of other creepy crawlies to boot.
Kanjana Ketkaew, 35, with scorpions on her gown, wed Bunthawee Sengwong, 29, on Valentine's Day in the Thai resort town of Pattaya in 2006.
Kanjana holdsaworld record for staying inaplastic cage with 3,400 scorpions for 32 days. Her husband holdsaworld record for staying inacage with 1,000 centipedes for 28 days.
သတို့ သားတော့ မသိ၊ ငတို့ များတော့ မြင်ရတာနဲ့ တင်
Weird weddings ... the road to love
ငယ်ငယ်တုံးကကြည့် ခဲ့ ဖူးတဲ့On the road ဆိုတဲ့ ဂျပန် အချစ်ကားလေးကို
၂၀၀၈ ခုနှစ်က ယူကရိန်း နိုင်ငံ ကိယက်ဗ် မြို့ မှာပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့သူတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
ကို သတို့ သား Yevgeni Okayevich နဲ့သတို့ သမီး Galina Grann တို့ ဟာ
သူတို့ ရဲ့ ဆိုင်ကယ် အသီးသီးကိုစီးပြီး လာရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်တဲ့ ....
THIS isawheel-y novel way to say I Do.
Yevgeni Okayevich and his bride Galina Grann ride their motorbikes during their wedding in central Kiev on5July, 2008.
ကဲ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆိုင်ကယ်မစီးပဲ ငှက်ကုလားအုပ်စီးကြတဲ့ သတို့ သားနဲ့ 
သတို့ သမီးတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေး အမှတ်တရကြည့် လိုက်ပါဦး....
မကိကီ တို့ ရဲ့ထိုင်ဝမ်ရွှေပြည်ကြီးက ဇနီးမောင်နှံအသစ်စက်စက်တို့ ဟာအဲ
ဒီလို ငှက်ကုလားအုတ်စီးပြီး တစ်သက်မခွဲတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပနိုင်ဖို့ တစ်ခြား
သောပြိုင်ဘက်ပေါင်း ၄၂ ဦးကို အနိုင်ရခဲ့ ကြရပါတယ်တဲ့ ....
တစ်ကယ့် ကိုတစ်မူထူးတဲ့ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ကမ္ဘာ့ ဂီးနစ်မှတ်
တမ်းမှာကို ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်ဆိုပဲ....
ကိုယ့် ဆရာတို့ / ဆရာမတို့ လည်း သူများနဲ့ မတူ၊ တစ်မူထူးအောင်စဉ်းစားထားနိုင်
Posted by Unknown | at 1:37 AM |4comments
Labels: News : The Sun
အိုမဲ့ အိမ်မဲ့ ၊ အိမ်ခြေယာခြေမဲ့ များ၏ဘ၀ကိုနားလည်န...
'GiantGeorge' the 7ft-long blue great dane who cou...
Indonesian minister says immorality causes disasters
Black magic fears as boy, 2, is hospitalised with ...
ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ လက်ဆောင်တဲ့ လား....
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့ မှ အခမဲ့ ပေးမယ်...
Chinese man gets remote control stuck in bottom
အသက်ကလေးရယ်တဲ့ ရှည်စေလို .....
Al-Qaeda tot stunt
Failed at Love? Take Two Days Off Work!
Former Miss Argentina, Solange Magnano, 38, dies a...